गंगामायाले कहिल्यै न्याय पाउलिन् त ? « Pana Khabar
नेपाली समाज जुन मात्रामा स्वार्थी र शक्तिको पुजारी हुँदैगएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने गंगामायाले न्याय पाउने सम्भावना भने कमै छ । माओवादी विद्रोह कालमा भएका वा माओवादी नेता कार्यकर्ता संलग्न सबै अपराध सत्य निरुपणको विषय हुनसक्तैन र अदालतमा मुद्दा चलाइसकिएको भए सामान्य प्रक्रियाअनुसार नै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने नजिर सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसैले बालक कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारामाथि कारबाही गर्न कानुनले रोक्तैन । राजनीतिक व्यक्ति वा राजनीतिक कारणले भएका घटनाबाहेक अरू घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर सत्यनिरुपणको विषय बनाउन खोज्नु न्याय मेटाउन गरिएको षड्यन्त्रमात्रै हो । तर, नागरिक समाज वा मानव अधिकार रक्षक समुदाय कसैले पनि निरीह गंगामायाका पक्षमा आवाज उठाएका छैनन् र उठाउने लक्षण पनि छैन । त्यसैले सत्याग्रही डा. केसीका पक्षमा देखिएका अनुहार र आवाजम पाखण्ड बढी देखिएको छ । न्यायाधीशकाे मानहानिको मामिलामा अदालत यति संवेदनशील हुनसक्तो रहेछ । नागरिक समाज र राजनीतिक नेताहरू सत्याग्रहीका पक्षमा सडकमा पनि अाउँदा रहेछन् । के यही समूह विशेषगरी राजनीतिक नेताहरू गंगामायाका पक्षमा पनि सडकमा उभिएलान् र उनले न्याय पाउलिन् ?बाह्रखरीको सम्पादकीय बाट